SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Ndakanyepera mhamha vangu nezvemumwe mukomana wandaigara ndichitaura naye. Asi vainyatsozviona kuti ndaivanyepera. Pandakazovanyepera kechi3, vakabva vatsamwa. Ndakarambidzwa kubva pamba kwemavhiki maviri uye ndakarambidzwa kushandisa foni yangu kana kuona TV kwemwedzi wese. Handina kuzombonyepera vabereki vangu futi!”—Anita.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Zvamakabvisa nhema, mumwe nomumwe wenyu ngaataure chokwadi nomuvakidzani wake.”—VaEfeso 4:25.
“Ndakanyepera vabereki vangu ndikafunga kuti ndabudirira, asi ndakazobatwa patopera nguva pavakanditi nditsanangurezve kuti zvakafamba sei. Zvandakanga ndataura zvakanga zvakasiyana nekure nezvakanga zvaitika zvekuti ndakatadza kuzviyeuka. Kana ukagara wataura chokwadi hauzombonetseki kuyeuka zvakaitika!”—Anthony.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Miromo inoreva nhema chinhu chinosemesa Jehovha, asi vaya vakatendeka vanomufadza.”—Zvirevo 12:22.
“Ndine shamwari yangu inoti kana ichitaura nyaya inotaura ichiwedzeredza uye inotaura nepasipo. Ndinomuda uye ndinoedza kusatsvaka zvakawanda-wanda pane zvaanenge ataura. Asi zvakaoma chaizvo kubvuma zvaanenge achitaura.”—Yvonne.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Tinoda kuva vakatendeseka muzvinhu zvose.”—VaHebheru 13:18.
“Mumwe mukadzi aifamba pamberi pangu akadonhedza mari. Ndakainhonga ndikabva ndamupa. Akanditenda chaizvo, akati: ‘Iii, waita hako. Vanhu vashoma vanoita zvawaita izvi.’ Ndakafara kuti ndainge ndaitawo chimwe chinhu chakanaka!”—Vivian.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Vanofara vaya . . . vanoita zvakarurama nguva dzose.”—Pisarema 106:3.
“Mhuri yedu inoita basa rekutsvaira mahofisi uye dzimwe nguva tichitsvaira tinogona kusanganidzana nekoini riri pasi. Tinobva tariisa padhesiki rinenge riri padhuze. Mumwe mushandi akapedzisira abhowekana nazvo, akazoti: ‘Nekoiniwo here veduwee!’ Asi munozivei? Aivimba nesu chaizvo.”—Julia.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Ita zvose zvaunogona kuti uzvipe kuna Mwari uchitenderwa, somushandi asina chokunyara nacho.”—2 Timoti 2:15.
“Ndakapiwa cheki yemari yemunhu akashanda maawa 80 asi ini ndakanga ndashanda maawa 64. Ndaigona kungozvinyarara ndodya hangu mari yacho asi zvakandiremera kuita zvinhu zvakadaro. Ndakanoudza maneja uye akanditenda chaizvo. Kambani yacho ine mari asi ndaiona kuti ndikaitora ndinenge ndichidya mari yekuba.”—Bethany.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Munhu anonyengedzera anosemesa Jehovha, asi Iye anoshamwaridzana nevakarurama.”—Zvirevo 3:32.
Ona kuti ungaita sei kuti zvinhu zvisanyanya kuipa.